Golaha Wakiilada Soomaaliland oo ka hor-yimid xaaladii deg dega aheyd. - Latest News Updates
Golaha Wakiilada Soomaaliland oo ka hor-yimid xaaladii deg dega aheyd.
Xildhibaannada Golaha Wakiilada Soomaaliland ayaa Maanta waxaa ay kulan ka yeesheen xaaladii deg dega aheyd ee uu Maalin ka hor deegaano ka tirsan Gobolka Sanaag kusoo rogay Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Madaxweynaha Soomaaliland ayaa dhawaan xaalad deg deg ah oo socon doonta mudo saddex bilood ah waxa uu ku soo rogay Degmooyinka Gar-adag, Ceel Afweyn iyo Ceerigaabo, kadib markii Gobolka Sanaag lagu dilay Saraakiil ka tirsanaa Ciidamada Soomaaliland.
Kulanka Golaha Wakiilada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa 107 Xildhibaan,waxaana taageeray xaalada deg deg ah ee uu soo rogay Madaxweynaha Soomaaliland 41 xildhibaan halka 66 kale ay diidaneen, hayeeshee Guddoomiyaha Golaha Wakiilada uu kulanka soo xiray.
Intaasi kadib buuq ayaa ka dhacay Xarunta Golaha Wakiilada Soomaaliland ee Magalada Hargeysa , iyada oo gudoomiyaha Golaha Wakiilada uu sheegay in dib loo dhigay codeynta xaalada deg dega ah,isla markaana Maalinta sabtida ah dib la i sugu soo laaban doono.